Akụkọ - Igwe ọkụ na-egbu ahụhụ nke anwụ nwere ike imeziwanye mmebi ahụ
Anyanwụ ike ahụhụ na-egbu oriọna nwere ike n'ụzọ dị irè melite pesti mmebi
China, nke nwere oke ọhịa, siri ike na njikwa nsị. Ọ bụrụ na agwọghị ụmụ ahụhụ dị n’ọhịa n’oge, ọ ga-emetụta gburugburu ebe ndị ọzọ. Yabụ, anyị kwesịrị itinye oke ikuku na oke ahụhụ. Ọgwụ a na-achịkwa ọgwụ ahụhụ a dabere na ọgwụ ahụhụ, nke na-ekwekọghị na nchekwa gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi chọrọ. Oriọna insecticidal lamp bụ ụdị ọhụrụ nke anụ ahụ na-achịkwa ahụhụ, nke nwere ike iwelie ogo nke mmebi ahụhụ na-emebi emebi gburugburu ebe obibi.
Maka oriọna insecticidal solar, ọtụtụ ndị maara nkọwa. Isi ọrụ nke anyanwụ insecticidal lamp bụ ọnyà na igbu pests. Site na ọnyà na igbu pests, ọ nwere ike hụ na gburugburu uto nke kụrụ. O tumadi mejuputara uzo ato: osisi, okpu oriọna, paneli na igwe na batrị.
Iji mewanyewanye uru akụ na ụba, nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nke obibi nke ọrụ ugbo, na-ebugharị ihe nchekwa na ịdị mma nke ọrụ ugbo na nri maka ọha mmadụ, ma kwalite mmepe mmepe nke ọrụ ugbo, ọrụ ugbo nke oge a emeela edemede banyere teknụzụ na-achịkwa pesti. Site na itinye akụrụngwa iji mee ka mgbochi na ịchịkwa ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ na ahụhụ, ọ bụghị naanị na ọ na-amata mgbochi na njikwa dị n'otu, mana ọ na-emekwa ka nsonaazụ na ịchịkwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị mma, na-enye aka iji hụ na mbelata nke pesticides na mmụba nke ego ndị ọrụ ugbo, na-etinye ntọala siri ike maka mmepe nke ọrụ ugbo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke oge a na ọrụ ugbo.
Oriọna insecticidal lamp na-arụ ọrụ dị oke mkpa na mgbochi na njikwa nke ọrịa ihe ọkụkụ na ụmụ ahụhụ ahụhụ. Ọ bụ teknụzụ na-achịkwa anụ ahụ nkịtị ma na-arụ ọrụ dị mkpa na mgbochi akwụkwọ ndụ akwụkwọ na ịchịkwa ọrịa akuku na ụmụ ahụhụ ahụhụ. Iji phototaxis nke ụmụ ahụhụ, na-eji isi mmalite ọkụ na-adọrọ adọrọ na pests, na-eji ụzọ igbu ọchụ, na-achịkwa ọnụ ọgụgụ pests na mpaghara nnwale, belata ojiji nke pesticides, na-ebelata mmetọ gburugburu ebe obibi, na-akwalite mmepe mmepe nke mmepụta nri. , nwere olile anya sara mbara gbasara oru ugbo.
Post oge: Jun-22-2021